Waxyaabaha lagu daro PCv, dejiyaha kuleylka ee PCV, Xasilinta PCv - Aimsea
hal baako xasilin loogu talagalay jilicsanaanta
hal baako xasiliya oo loogu talagalay gogosha
hal baako xasiliya oo xumbaynaya
hal baako xasiliya oo codsi caafimaad ah
hal baako xasiliya oo loogu talagalay tuubooyinka & rakiban
hal xasiliyaha xirmada ee astaamaha
hal baako xasiliya si hufan
hal baako xasiliya silig & fiilooyin
Aimsea Waxaa la aasaasay 1997 iyadoo la diiwaan galiyay raasamaal dhan 20 milyan yuan. Waa shirkad tiknoolajiyad sare oo heer qaran ah oo ku takhasustay is-dhex-galka cilmi-baarista, soo-saarka iyo iibinta xasiloonidayaasha aan habboonayn ee deegaanka u habboon. Deganeyaasha ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa alaabada PVC, sida siligga iyo fiilada, qalabka caafimaadka ee carruurta lagu ciyaaro, badeecooyin hufan, alaabooyin isku dhafan, xirmooyinka tuubbada, xaashiyaha qurxinta, kabaha xummada leh, albaabbada iyo astaamaha daaqada, iwm. Kaadiyeyaasha kalsiyum-zinc saaxiibtinnimo leh. Waxay leedahay 13 shatiyada halabuurka ah iyo in kabadan 30 codsiyo patent ah. Waxay ku jirtaa heerka hoggaamineed ee caalamiga ah ee tiknoolajiyaddeeda aqooneed ee u gaarka ah. Ku qalabaysan cilmi baaris cilmiyeed iyo koox farsamo, R&D caalami ah iyo xarun wax soo saar, oo leh hal-abuurnimo madax-bannaan iyo tartan, khadka wax soo saarka oo si otomaatig ah u shaqeynaya, awoodda wax-soo-saarka sanadlaha ah ee 40,000 tan, warshadaha iibka tayada sare leh, ayaa u adeegay in ka badan 500 macaamiil oo dhammaystiran xalka caagga ah ee PVC u habboon .
Waxaa la aasaasay 1997
23 sano oo khibrad ah
In ka badan 30 codsi patent ah
Raasamaal dhan 20 milyan yuan
E-saaxiibtinimo aan xasillooneyn oo xasilloonida u ah kaalshiyamka 'zinc PVC anti-static resistor homogeneous'
Xasiliyayaasha aan sunta ahayn qalabka caafimaadka ee irbadaha tubada hufan
Xasiliyaha Aan Sunta Ahayn Waayo Edge Gooyo Jilicsan oo Gogosha PVC Dabacsan
hal baako xasiliyaha
wixii macluumaad ah
tuubooyin & rakiban
PVC xasilinta derin cayriin ...
Sharaxaadda Badeecadda Bacriminta lagu daray shaxda PVC waxay kordhisaa dabacsanaanta ku dhowaad heer kasta oo la doonayo waxayna si weyn u dheereysaa baaxadda codsiyada loogu talagalay PVC-balastariga Badanaa waxaa loo isticmaalaa tuubooyinka (cuntada, caafimaadka), Hooska (cadaadiska, beerta, bamka), goomayaasha, albaabbada lulma iyo gacmaha. Joojiyeyaashu waxay leeyihiin xasillooni kuleyl badan, ur hooseysa, tayada hawada gudaha oo aad u fiican, iswaafajin wanaagsan oo lala yeesho bacrimiyeyaasha. Faa'iidooyinka La kulan heerka caafimaadka qaranka GB15593-1995; Waa laga gudbay ...
Xasiliyayaal bilaash ah oo sun ah ...
Sharaxaadda Badeecadda Marka laga reebo filimada adag ee PVC, waxaa sidoo kale jira xaqiiqo ballaaran oo codsiyada loogu talagalay CaZn Xasilinta oo ku saleysan filimada PVC ee dabacsan. Suuqa waxaa ku badan filimada caaga ah, in kastoo ay sii kordhayaan filimada dabacsan ee bilaa caag-la’aanta ah ee suuqa soo galaya. Filimkan dabacsan ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa filimada dahaarka leh, filimada duubista daaqadaha, filimka is-dulsaarka, filimka xayeysiinta, filimada soo yaraada, filimada duubista gawaarida, filimaanta daabacan, filimyada calaamadaha taraafikada, filimada qalabka toy, filimada caafimaadka, dharka miiska ...
Sharaxaadda Badeecadda Muddo tobanaan sano ah, alaabada hufan ee PVC waxaa loo qaybiyay mid adag oo rogrogmi kara, kuwaas oo loo adeegsaday barnaamijyo kala duwan. Marka loo eego doodaha hadda jira ee ku saabsan ilaalinta deegaanka iyo joogtaynta, qaybaha suuqyada mustaqbalka waxay la kulmi doonaan caqabado muhiim ah. Waxyaabaha Tin-ku jira, ee lagu beddeli karo xalalka bilaa-daa-da ah ayaa sii kordheysa. Marka la eego, waxaa lagama maarmaan ah in fiiro gaar ah loo yeesho qawaaniinta sharciga ee kala duwan, sida farmashiyaha, cuntada ...
Hal xirmo oo kuleyl ah Stabiliz ...
Sharaxaadda Alaabada Filimka adag ee PVC ayaa badanaa loo isticmaalaa xirxirida wax soo saarka daawada ayaa ku habboon xirxirida kiniiniyada, kaabsoosha, irbadaha, cirbadaha iyo waxyaabo kale oo caafimaad oo badan. Iyo sidoo kale, loo isticmaalo alaabada lagu ciyaaro, aaladaha, qalabka wax lagu rakibo, waxyaabaha la isku qurxiyo, qalabka, waxyaabaha cuntada, qurxinta, qalabka dhismaha iyo warshadaha kala duwan ee loogu talagalay xirxirida. Filimadan ayaa inta badan laga soo saaraa Ca / Zn PVC Stabilizers maxaa yeelay waxay leedahay waqti dheer, xoog siligga sare, caddeynta qoyaanka, iska caabbinta ilmada, maya ...
Calcium Zinc kuleylka PVC ...
Sharaxaadda alaabada PVC tuubooyin dheellitiran iyo ...
Joojiyeyaasha PVC ee ca ...
Sharaxaadda Waxsoosaarka Kumbuyuutarka ...
Xasilinta kuleylka ee PV ...
Sharaxaadda sheyga Kalsiyum Zinc kuleylka kuleylka ...
PVC Xasiliyaha for Irr ...
Sharaxaadda Badeecada Our Calcium Zinc PVC S ...
PVC Kaalshiyam Zinc Stabi ...
Sharaxaadda alaabada PVC Xasiliyaha / kuleylka st ...
Xasiloonida PVC ee Wat ...
Qeexitaanka alaabta Kaalshiyamka Zinc xasilinta ...
PVC Stabi tayo sare leh ...
Sharaxaadda sheyga vinyl jilicsan waa ve ...
Best xasiliyaha fo ...
PVC Xasiliyaha Aan Sunta lahayn
Xasiloonida aan sunta ahayn ee PVC waa xasilloonida ugu sareysa ee hufan, hufan ee sunta zinc-ku saleysan ee kuleylka kuleylka ah ee loo yaqaan 'PVC xasilinta kuleylka' oo ay sameysay si cilmiyeysan oo isku dhafan xeryahooda sunta aan sunta ahayn iyo isku dhafka gaarka ah. Xasiliyaha kuleylka muddada-dheer ee xasilloonida aan sunta ahayn ee 'PVC' wuxuu leeyahay waxqabad aad u fiican, iyo dabka ...
Faa'iidooyinka Xasiliyaha Ca Zn
Waqtigan xaadirka ah, xasiliyayaasha kuleylka ee PVC badanaa waxaa ka mid ah cusbada leedhka, kaalshiyamka isku dhafan iyo zinc, daasadda dabiiciga ah, antimony-ka dabiiciga ah, dejiyeyaasha kuleylka caawiya ee dabiiciga ah iyo xeryahooda dhulka oo dhif ah. Wax soo saarka ugu weyni waa xasiliyaha cusbada ee hogaamiyaha dhaqameed iyo xasiliyaha iskujira Ca Zn. Ca Zn xasiliyaha waa cagaar ...
XARUNTA FARSAMADA AIMSEA, JIDKA QUIBAO, XINTANGCUN, DEGMADA HUIYANG, HUIZHOU, GUANGDONG, CHINA 516221
PCB Dejiye Heat Waayo Flexbile, Qaboojiye kuleylka PCV, PCv One Pack Xasiliyaha, Waxyaabaha PCV, Xasilinta PCv, Dajiyaha xasilloonida aan sunta ahayn,